YouTube waxaa ka buuxda yuulka, videos heeso iyo filimaan lagu qoslo. Ma doonaysaa in la ururiyo oo dhan video Christmas si aad iyo aad saaxiibo on YouTube ku yeelan karto iid Christmas? YouTube playlist waa qalab weyn oo koox la xiriira videos oo la ciyaari karaa mid kale ka dib markii aan la dhexgelin. Waana arrin sahlan in la abuuro playlist YouTube Christmas. Tani waa dhab ahaan waxa this page dabooli doono. Waxaad la Wondershare AllMyTube soo bixi kartaa video ah playlist oo dhan, hubi qalab hoos.
Sida loo sameeyo playlist Christmas a on YouTube
Marka aad ka helay video YouTube Christmas ama uploaded video Christmas ah in YouTube, oo doonaya in ay u waxaa ka mid ah in aad playlist, waxaad haysataa 2 siyaabood oo sidaas loo samayn marka aad gasho in aad xisaabta YouTube:
1. Laga bilaabo bogga video ah : soo socda si ay + video Add to button aad daawashada hoos Riix fallaadhiina waxay ka, ka dibna aad u soo xulan kara playlist jira YouTube ama ku darto mid cusub. Waxa kale oo jira ah "oo lagu daray" button kor ku YouTube video thumbnail on galeeysid inaad ku darto jecel videos si aad u playlist.
2. Laga My Videos : On My Videos in menu ballaariyeen, guji badhanka + New soo socda in erayga, playlist dhinaca bidix ee shaashadda. Marka xiga, marka aad ka heli video Christmas ah, oo aad isticmaali karto habka ku xusan in lagu daro video cusub u playlist madhan Christmas.
Talooyin: Sidee si aad u hesho Videos Christmas?
1. Si toos ah baadhaan YouTube la keyword ah "Christmas". Waxa lagugula talinayaa inaad u xalliso dalxiis oo ay View Tirinta, habboonaanta, taariikhda Upload ama rating.
2. Search Christmas channel la xiriira ama playlist si ay u sahamiyaan more videos music Christmas.
3. Haddii aad og tahay khabiir ku ah ee video Christmas, iyadoo la isticmaalayo "christmas" sanduuqa raadinta si ay u soo koobto natiijada.
4. Search YouTube la Christmas song horyaalka ama fanaaniinta.
Halkan waa 4 playlists YouTube for Christmas, eegno!
1. Videos Christmas Qoyska abuuray by Holderness Qoyska
3. Christmas YouTube playlist: Rock iyo Qaar kale
Sida loo sameeyo YouTube playlist ka baxsan YouTube
Intaa waxaa dheer, waxaa jira hab kale oo ay u qabanqaabiyaan aad jeceshahay videos Christmas on YouTube haddii aad isticmaasho Firefox ama Chrome browser. YouTube Music Player iyo MultiPartTube kordhin yihiin siday u kala horreeyaan loo isticmaalo Firefox ama Chrome. Marka ka danbe inta badan waa qaybo badan oo ka mid ah videos on YouTube, YouTube Music Player kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan caadadii Christmas ama playlists kale YouTube.
Waxaa jira faa'iidada iyo khasaaraha labada si ay u sameeyaan playlist YouTube ka baxsan YouTube:
Faa'iido : isla ciyaari video; xaq guji in lagu daro video in playlist, xakameeyo play music ee ku haboon.
Qasaarooyinka : ma furi kartid in browser kale; khasaaraha markii shilalka computer.
Si kastaba, aad leedahay siyaabo badan si a playlist Christmas YouTube.
>> Sidoo kale eeg: Download iyo Beddelaan YouTube playlist in MP3 .
> Resource > YouTube > Sida loo sameeyo YouTube playlist ah Christmas